Famonoana aliminioma induction miha-mahazo vahana eo amin'ny sehatry ny indostria. Ohatra iray mahazatra ny famoahana fantsona isan-karazany amin'ny vatan'ny mpanondrana hafanana. ny Indonezianina fanalefahana be mpampiasa amin'ity karazan-dingana ity dia tsy misy manodidina azy, izay azo antsoina hoe fomba "Horseshoe-hairpin". Ho an'ireo coil ireo, ny sahan'andriamby ary ny fizarana amin'izao fotoana izao dia 3-D voajanahary. Amin'ireo rindranasa ireo dia misy ny olana amin'ny kalitao iraisana sy ny tsy fitovizan'ny valiny amin'ny ampahany. Mba hamahana olana iray toy izany ho an'ny mpamokatra fiara lehibe iray, ny programa fanaingoana solosaina Flux3D dia nampiasaina ho an'ny fandalinana sy fanatsarana. Ny fanatsarana dia nahitana ny fanovana ny coil fampidirana sy ny fanaraha-maso ny flux magnet. Ny coil induction vaovao, izay nohamarinina tamina laboratoara, dia mamokatra ampahany misy tonon-taolana avo lenta kokoa amin'ny toerana famokarana maro.
Ny fiara tsirairay dia mitaky mpanakalo hafanana marobe (cores heater, evaporator, condenser, radiatera, sns.) Ho an'ny fantsom-panafody, rivotra, fanamafisana ny solika, sns. Ny ankamaroan'ny mpivarotra hafanana fiara mpandeha dia vita amin'ny aliminioma na aliminioma ihany. Na dia ny motera iray aza dia ampiasaina amin'ny maodelim-piarakodia maromaro, ny fifandraisana dia mety miovaova noho ny lamina samihafa eo ambanin'ny hood. Noho io antony io, fanazaran-tena mahazatra ho an'ireo mpanamboatra faritra ny manao vatan-dehiben'ny hafanana fototra ary avy eo mampiditra mpampifandray samihafa amin'ny asa faharoa.
Ny vatan'ny mpanondrana hafanana mazàna dia misy vombony, fantsona ary lohan-doha vita amin'ny alimo ao anaty lafaoro. Aorian'ny fiterahana, ireo mpivarotra hafanana dia namboarina ho an'ny maodelin'ny fiara nomena amin'ny alàlan'ny fametahana tanky na nylon na fantsom-boaloboka matetika misy alàlan'ny fifandraisana. Ireo fantsona ireo dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody MIG, lelafo na fampidirana brazing. Raha misy ny brazing dia tena ilaina ny fanaraha-maso ny maripana noho ny fahasamihafana kely amin'ny fihenan'ny hafanana sy ny hafanana ho an'ny aliminioma (20-50 C arakaraka ny firaka, ny metaly sy ny atmosfera famenoana), ny fikojakojana hafanana avo an'ny alimina ary ny halaviran'ny hafa. ny tonon-taolana dia maty nandritra ny fandidiana teo aloha.
Fanamorana ny induction dia fomba mahazatra amin'ny famoahana fantsona isan-karazany hanafanana lohan-doha. Ny sary 1 dia sarin'ny an induction brazing napetraka ho an'ny famoahana fantsom-pipa amin'ny fantsona amin'ny lohateny fampidirana hafanana. Noho ny fepetra takiana amin'ny fanafanana marina, ny endrik'ilay coil fampidirana dia tsy maintsy eo akaikin'ny vatan'ny biriky. Noho izany dia tsy azo ampiasaina coil varingarina tsotra, satria tsy azo nesorina ilay ampahany rehefa avy nitera-doza ny mpiray.
Misy fomba roa coil fampidirana am-bidy roa ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ireo tonon-taolana ireo: inductors style "clamshell" sy "horshoe-hairpin". Ireo mpampiditra "Clamshell" dia mitovy amin'ny inductors silindrika, saingy misokatra izy ireo mba hamela ny ampahany esorina. Ny inductors "Horseshoe-hairpin" dia miendrika soavaly soavaly enta-mavesatra amin'ny ampahany ary coil roa volo amin'ny volo mifanohitra amin'ny vitrana.
Ny tombony amin'ny fampiasana inductor "Clamshell" dia ny fanamafisana dia mitovy fanodinana kokoa ary somary mora vinavinaina. Ny fatiantoka inductor "Clamshell" dia ny rafitra mekanika takiana izay sarotra kokoa ary ny fifandraisana avo lenta dia tsy azo atokisana.
Ireo mpiorina "Horseshoe-hairpin" dia mamorona lamina hafanana 3-D sarotra kokoa noho ny "Clamshells". Ny tombony amin'ny inductor "Horseshoe-hairpin" dia ny fanamorana ny fizarana.
Ny fanahafana ny solosaina dia manatsara ny fiterahana
Mpanamboatra mpamatsy hafanana lehibe dia manana olana kalitao amin'ny famonoana ny tononkira aseho amin'ny sary 1 amin'ny alàlan'ny inductor-style hairhoe-hairpin. Ny kitrokely dia tsara ho an'ny ankamaroan'ny ampahany, fa ny hafanana kosa dia tsy hitovy tanteraka amin'ny faritra sasany, ka tsy ampy ny halalin'ny fiaraha-miasa, ny hatsiaka mangatsiaka ary ny metaly mpameno mandehandeha eo amin'ny rindrin'ny fantsona noho ny hafanana be ao an-toerana. Na dia eo aza ny fitsapana ny mpanova hafanana tsirairay avy amin'ny famoahana, ny ampahany sasany dia mbola tafaporitsaka tamin'ity fiaraha-miasa ity. Center for Induction Technology Inc. dia nifanarahana mba hamakafaka sy hamahana ny olana.
Ny famatsiana herinaratra ampiasaina amin'ny asa dia manana fiovaova miovaova 10 ka hatramin'ny 25 kHz ary fahefana manana 60 kW. Amin'ny dingam-piterahana brazing, misy mpandraharaha mametraka peratra vy fameno amin'ny faran'ny fantsona ary mampiditra ny fantsona ao anaty fantsona. Apetraka amin'ny familiana manokana ny hafanana ary afindra ao anaty ilay mpitaingin-tsoavaly.
Ny faritra feno brazing dia fenoina. Ny matetika ampiasaina hanafanana ny ampahany mazàna dia 12 ka hatramin'ny 15 kHz, ary ny fe-potoana fanafanana dia manodidina ny 20 segondra. Ny haavon'ny herinaratra dia voalamina miaraka amin'ny fihenan'ny tsipika amin'ny faran'ny tsingerin'ny hafanana. Ny pyrométer optika dia mamono ny herinaratra rehefa mahatratra sanda efa voatendry ny maripana amin'ny sisiny aoriana.
Betsaka ny anton-javatra mety hiteraka ny tsy fitoviana niainan'ny mpanamboatra, toy ny fiovaovan'ny singa iraisana (refy sy ny toerana) ary ny tsy fifandanjana sy miovaova (ara-potoana) ny fifandraisana elektrika sy ny hafanana eo anelanelan'ny fantsona, fantsona, peratra famenoana, sns. tsy milamina amin'ny fomba mahazatra, ary ny fiovana kely amin'ireo anton-javatra ireo dia mety miteraka dinamika samihafa. Ohatra, ny peratra vy feno famenoana misokatra dia afaka miala sasatra amin'ny herin'ny herinaratra elektrika, ary ny faran'ny maimaim-poana amin'ny peratra dia azo entina miverina amin'ny herin'ny capillary na mijanona tsy voadona. Ny antony mahatonga ny tabataba dia sarotra ny mampihena na manafoana, ary ny vahaolana amin'ny olana ilaina amin'ny fampitomboana ny hamafin'ny fizotran'ny fizotrany rehetra. Fitaovana mahomby handinihana sy hanatsarana ny fizotrany ny fanahafana ny informatika.
Nandritra ny fanombanana ny fizotran'ny famonoana brazing dia hita ny hery elektrôinamika matanjaka. Amin'izao fotoana itodihana ny herinaratra dia mazava fa miaina fanitarana ny kitron-tsoavaly noho ny fampiharana tampoka ny herin'ny herinaratra. Noho izany, ny inductor dia nanjary matanjaka ara-mekanika, ao anatin'izany ny fampidirana takelaka fiberglass fanampiny (G10) mampifandray ny fakan'ny coil volo roa. Ny fihetsiketsehana hafa misy ny herin'ny herinaratra dia ny fanovana vy metaly fameno vy avy any amin'ireo faritra akaikin'ny fiolahana varahina izay matanjaka kokoa ny sahan'andriamby. Amin'ny fizotra mahazatra dia mizara fanamiana manodidina ny tonon-taolana ny metaly filler noho ny hery capillary sy ny hery misintona mifanohitra amin'ny fizotra tsy ara-dalàna izay mety hahalany ny tonon-taolana na hiakatra manaraka ny fantson'ny fantsona metaly.
satria fampidirana alim-bary alimina dia dingana iray tena sarotra, tsy azo atao ny manantena fanahafana marina ny rojom-panambadiana misy ifandraisany (electromagnetic, thermal, mechanical, hydrodynamic and metallurgical). Ny dingana manan-danja indrindra sy azo fehezina dia ny famokarana loharanom-pahalalana elektromagnetika, izay nodinihina tamin'ny alàlan'ny programa Flux 3D. Noho ny toetran'ny sarotra amin'ny fizotran'ny brazing induction, ny fitambarana simulasi sy ny andrana amin'ny solosaina dia ampiasaina amin'ny famolavolana sy fanatsarana ny fizotrany.
Induction_Aluminum_Brazing miaraka amin'ny Computer_Assisted
Sokajy Technologies Tags brazer aluminium, brazing aluminium, dingana brazing aluminium, alim-bary fampidirana aluminium, fanamainana brazing fampidirana aluminium, mividy brazer aluminium, mividy brazer fampidirana aluminium, famonoana aliminioma matetika, Induction Aluminum Brazing, Fampiharana alim-bary alimina alimina, coil brazing alim-bolo, induction aluminium aluminium Post Fikarohana